जब बैंकमा पैसा लिन ला’श पुग्यो, त्यसपछि कर्मचारीको सा’तो गयो — Sanchar Kendra
काठमाडौं। भारतको बिहार राज्यको पटनामा एक बैंकमा एउटा ला’श आफ्नो पैसा लिन पुग्यो । बैंकमा उसलाई देखेर कर्मचारीको सा’तो गयो । पटनाछेउको शा’हजहाँपुर था’ना क्षेत्रको सि’गरियावांमा केनरा बैंकको शाखामा ला’श पैसा लिन पुगेको हो ।
यहाँका महेश यादवको मंगलबार बिहान मृ’त्यु भएको थियो । मृ’त्युपछि गाउँलेहरुले अ’न्तिम संस्कारको लागि बैंकमा गएर उनको खातामा भएको पैसा बैंकका कर्मचारीसँग मा’गे तर बैंक म्यानेजरले पैसा दिन मानेनन् । यो कुराले रिसाएका गाउँलेले यादवको ला’श लिएर बैंकमा पुगे र ला’शलाई बैंकभित्र राखिदिए ।
लगभग ३ घण्टासम्म बैंकमा महेशको ला’श त्यत्तिकै रह्यो । गाउँलेहरु पैसा नलिइ मान्न तयार थिएनन् । अन्ततः म्यानेजरले आफ्नै १० हजार रुपैयाँ गाउँलेलाई दिएर वि’वाद सुल्झाए । पैसा पाएपछि गाउँलेहरुले महेशको ला’श लिएर अ’न्तिम सं’स्कारको लागि गए ।
खासमा महेशको बिहे भएको थिएन र उनको परिवारमा पनि कोही थिएनन् । बैंक खातामा उनले आफ्नो कुनै ह’कदार पनि उल्लेख गरेका थिएनन् र उनको के’वाइसी फाराम पनि जम्मा भएको थिएन । त्यसैले बैंकले प्रक्रिया पूरा नगरी उनको पैसा दिन मानेको थिएन ।
इनार खन्दा फेला पर्यो ‘१० करोड डलर पर्ने एउटा विशाल नीलमणि’
ए’लिय’नले पृथ्वीलाई ओखरजस्तै फुटाइदि’ने विशेषज्ञको चे’ता’वनी, यस्तो छ कारण
चर्चाले सेलिब्रिटी बन्यो बाख्रा भन्दा सानो गाई
के हो मुस्लिम महिलालाई ‘बेच्न’ राखेको ‘सुल्ली डिल’?
पुरुषहरूले गुगलमा के-के खोज्छन ? पत्ता लाग्यो यस्तो अनौठो तथ्य